Heins, Tripitaka Koreana, Haein-sa - Daegu
Asia Korea Atsimo Daegu
Adiresy: 10 Chiin-ri, Gaya-myeon, Hapcheon, Gyeongsangnam-do, Korea Atsimo
Phone: +82 55-934-3000
Taonan'ny fototra: 802
Vidin'ny fitsidihana: $ 2
Azonao atao ny mahita ny tempoly tranainy indrindra any Haeins any Korea Atsimo any an-tendrombohitr'i Kayasan . Ity toerana miavaka ity, voasoratra ao amin'ny lisitry ny herin'ny UNESCO, dia misokatra ho an'ny mpizaha tany. Afaka mahazo any amin'ny toerana rehetra ianao, afa-tsy ny efitrano izay misy takelaka hazo tokana voatahiry - soratra masina Bodista.
Tantaran'ny Tempolin'i Haeins
Fotoana maherin'ny 12 taona no nanasaraka antsika hatramin'ny fotoana nanorenan'ny moanina Bodista roa voalohany ny tempolin'i Haeins voalohany. Nanomboka teo, niova ny endriny noho ny afo maro izay nianjera tamin'ny anjaran'ny tempoly. Ny fanarenana farany dia natao tamin'ny taonjato XIX. Taorian'izay, ny trano fanorenana dia nahazo ny endrika ankehitriny.
Inona no mahaliana momba ny efitrano tempolin'i Heinz?
Ny anaran'ny tempoly dia nadika hoe "taratra ao anaty rano", satria eo amoron'ny renirano iray no misy azy. Ny fanorenana tsirairay ao amin'ilay trano dia manana ny tanjony manokana, izay tsy niova nandritra ny taonjato maro. Ny mpizaha tany dia avela hitsidika ny efitranon'ny tempolin'i Haein, afa-tsy ny trano firaketan'ny Bodista fahiny, izay misy tsangambato hazo manokana ao Tripitaka Koreana miaraka amin'ny fampianaran'i Buddha. Ireo mpizaha tany dia navela hijery eto amin'ny toeram-pivoahan'ny rivotra.
Ny maha-tokana ny tempoly ihany koa dia ny hoe ny halls dia tsy natokana ho an'ireo olo-masina izay midera ny Bodisma Koreana. Noho izany, ny Hall of Silence and Light dia natokana ho an'ny Bouddha an'i Vairochana, fa tsy Sokkamoni, toy ny mahazatra. Ny monastera ao amin'ny tempoly dia tandindon'ny dharma (lalàna sy fampianarana ny Bouddha).
Ireo tia tia tanindrazana dia haniry ny fomba itodian'ny tempoly ny karazana tendrombohitra. Ireo trano ireo dia tena tsara tarehy, izy ireo dia hosodoko amin'ny loko mamirapiratra ary voaravaka sary sokitra. Manara-maso akaiky ny toetry ny tempoly ny moine. Ny fidirana eto dia manomboka amin'ny làlana malaza "The Path of Awakening", any am-piandohan'ilay dia ny mpandeha dia mamakivaky ny vavahadin'ny Guardana any amin'ny kianjan'ny tempoly. Indro ny tempolin'i Gugwanrou, ary eo ankavanana ny tilikambom-bolo.
Aorian'izany, eo amin'ny kianja manaraka dia afaka mahita ny "Hall of the cosmic Buddha" na Dechzhlgvan, miaraka amin'ireo sarivongana fahiny. Eo amin'ny tanana ankavanana dia hisy tranokala misy soratra masina, ny sasany amin'izy ireo mandritra ny 1000 taona.
Ahoana no hahatongavana any amin'ny monasiteran'ny Haynes?
Tsy mora ny mankany amin'ny tempoly tsy manam-paharoa, fa ny olona iray izay afaka miatrika ny fahasarotana amin'ny tenany ihany dia handresy an'io lalana mankany amin'ny toerana masina bodista io. Ny lalana eto dia manomboka amin'ny tanànan'i Daegu , eo am-pototry ny tendrombohitra. Avy any amin'ny bus terminal Seobu Bus Terminal, miorina eo akaikin'ny fiantsonan'ny metro Seongdangmot, dia alefa isan'andro ny fiara fitaterana. Ilaina ny manangona vondron'olona 30 fara fahakeliny. Ny fisoratana anarana ho amin'ilay dia ho avy dia mety ho ao amin'ny tranokalan'ny tempoly, na izany aza, mariho fa ny fampahalalana dia ao amin'ny Koreanina, mba hahafahan'ny serivisy mpandika teny. Ny dia dia mitaky 1.5 ora, ary avy eo dia ilaina ny mandeha any an-tendrombohitra mankany amin'ny vavahadin'ny monasitera.
"Fiainana an-dranomasina", Singapore
Ny Museum of Sitamati
Beshbarmak - fitaovana fikarakarana sakafo
George Clooney dia naneho hevitra voalohany momba ny fitondran'i Amal
Ny fampiasana atody ho an'ny vehivavy
Ny mpaka sary dia manana mpankafy 1 tapitrisa ao amin'ny Instagram ho an'ny b / w sary, ary ho azonao ny antony!
Moa ve angina tsy azo ovaina?
Ny sakafo amin'ny trangana aretin'ny gallbladder
Ahoana ny fisorohana ny gorodona eo amin'ny balcony?
Taorian'ny niarahany tamin'i Vito Schnabel, nandany ny andro amoron-dranomasina niaraka tamin'ny ankizy sy ny namany i Heidi Klum
Fanazaran-tena amin'ny trampoline ho an'ny fahavoazana
Mazava sy mahagaga! Keanu Reeves dia hita amin'ny daty miaraka amin'ny olon-tsy fantatra miafina
Vola fisaka amin'ny tanana manokana
Matrices ho an'ny zaridaina
Iza no nokapaina voalohany?
Ny satroka felan'ny vehivavy